Mụọ mmemme site na iji Automaton na-egwuri egwu maka Android | Gam akporosis
Otu esi amuta mmemme site na iji Automaton na-egwu egwu: mụta ntọala nke asụsụ C na ndị ọzọ
Automaton bụ egwuregwu ọhụrụ nke na-etinye anyị n'ihu egwuregwu mgbagwoju anya nke ahụ ga-enyere anyị aka inwe ọganiizi iji mụta ịhazi mmemme n'asụsụ C ma nwee nghọta bụ isi nke ihe mmemme bụ n'onwe ya.
Echere m, ihe ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye n'ụwa nke mmemme, ma ọ bụ lee ihe ọ bụ, egwuregwu a ga-akpọrọ gị site na nkuzi dị iche iche dị na ọkwa dịkarịsịrị n'ụdị egwuregwu ọtụtụ egwuregwu gam akporo ndị ọzọ. Jikere ịbụ ihe loops, ọrụ ndị bụ isi na usoro nke ihe ndị bụ isi bụ iji mikpuo onwe gị kpamkpam na ụwa nke mmemme.
2 Automaton akụrisị igodo
3 Dee usoro mmemme
Ihe Automaton na-eme ka etinye gị n'ihu egwuregwu nke ị ga-ejikwa robot site na usoro iwu nke ị ga-eji mee mmemme ha. Edere iwu ndị ahụ site n'echiche mmemme dị mkpa ma ga - enyere gị aka ịghọta ntọala nke ụwa a.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-amụta eme usoro maka robot iji megharịa ugboro ugboro, na mgbe ọnọdụ ụfọdụ mezuru, robot ga-eme otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ. Ọ bụ egwuregwu dị ịtụnanya n'ihi n'eziokwu na ọ ga-enye gị ihe atụ ka ị nwee ike ịnwale ha n'onwe gị ma mụta site na mmemme.
N'ezie, mgbe ọ bụla otu bido usoro ihe omumeNwere ike ịnụ ka onye nkuzi na-ekwu na ụzọ kachasị mma iji mụta mmemme bụ mmemme. Nwere ike inwe ihe ọmụma gbasara njikọ, mara ọrụ niile na iwu ndị ahụ, mana ọ bụrụ na itinyeghị ya na omume wee bido idozi nsogbu, ị ga-ewere ya dị njọ.
Automaton akụrisị igodo
Nke ahụ bụ, ịkwesịrị ide ihe omume nke aka gị iji mụta ngwa ngwa, ma nke a bụ ebe Automaton zuru oke, ebe ọ na-amanye gị ide iwu ndị ahụ site na a usoro nke nkuzi nke ị ga-eme mmemme ka robot anyị gaa n’ihu, tụgharịa gaa n’akụkụ, bulie ihe ma hapụ ha ebe ọ bụla anyị chọrọ.
Ejiri Automaton jiri igwe ihe eji egwu vidiyo na C #. O nwere mmetụ pixelated iji nye ya nke ahụ na nzuzo na ochontero, na eziokwu bụ na a haziri ọkwa nke ọ bụla n'ụzọ zuru oke ka ị nwee ike ịka mma na mmemme a.
Dee usoro mmemme
Na ala ị ga-enwe akara ebe ị ga-ede dabere na ya site na ịpị iwu ndị dị n'aka nri, ihe ndị na-esonụ nke robot protagonist anyị iji mezue usoro a ọzọ. Na mbido ọkwa ọ bụla, a ga-akọwa anyị ihe ị ga - eme, na, ọ bụ ezie na ọ dị n’asụsụ Bekee, ọ naghị enwe nnukwu nsogbu.
Nyocha ya egwuregwu a kpara nke oma nke puru iche na ihe omuma ahu nke ahụ na-enye ya aka pụrụ iche. Isi ihe banyere egwuregwu a bụ igwe ya na ụzọ ahụ iji anya nke uche ihe ụwa nke mmemme bụ.
Varietydị ya dị iche iche iji mụta ihe gbasara mmemme
Ezi nka pixel
Kwesịrị ka a kpọọ ya n'ụlọ akwụkwọ praịmarị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Otu esi amuta mmemme site na iji Automaton na-egwu egwu: mụta ntọala nke asụsụ C na ndị ọzọ
OPPO Reno 2 enweela ụbọchị ngosi na Europe
Etu ị ga - esi nwee mgbanaka batrị ma ọ bụ ihe ngosi batrị na Galaxy S na Rịba ama site na afọ 3 gara aga